သတင်း – Page 171 – Burmese Online News
အသက်မပြည့်သေးတဲ့ ၈ တန်းကျောင်းသူကို ကားတင်ပြေးခဲ့တဲ့ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ကို ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ဥသျှစ်ပင်မြို့နယ်ထဲ ကနေ ရဲတပ်ဖွဲ့က ပြန်လည်ဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်။ စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်က ပြည်မြို့နယ်ထဲကကျေးရွာတရွာက အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးငယ်တယောက်ကို ရွာကျောင်းကကျောင်းထိုင်ဆရာတော် ဦးအဂ္ဂဓမ္မက ကားတင်ခိုး ယူသွားခဲ့တာပါ။ ကလေးမလေး ကျောင်းသွားစဉ်မှာ ဆရာတော်က သူ့ရဲ့ Honda Fit ကားနဲ့ ပြည်မြို့ ဘက်ကို ခိုးယူသွားဖြစ်ပြီး အောက်တိုဘာလ ၂ ရက်နေ့ ည ၉ နာရီလောက်မှာ ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ ဥသျှစ်ပင်နယ်မြေ၊ ကျောက်ဖူးအုပ်စု၊ ဆင်လူးကျေးရွာမှာ ဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့ ပြည်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးသန်းဇော်ဝင်းက ပြောပါတယ်။ “သူသွားတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်း တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ ခွဲပြီး ဖြန့်ကျက်ပြီးလိုက်ကြတာ ပြည်ခရိုင်ရဲ တပ်ဖွဲ့မှူးကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်ပြီးလုပ်တာ။ ဒီအမှုကိုအမြန်ပေါ်စေချင်တာ ကလေးမလေးက အသက်မပြည့်သေးတော့ တော်တော်လေး စိုးရိမ်တာ။ ဒါကြောင့် အားထည့်ပြီး...
Understanding the aim of the scholarship is important to your success. If you want to turn into adept at composing in Chinese, you should analyze all the facets of syntax spoken about in this section. As an easy method to boost your Cina Article Writing, you must engage inarange of writing exercises.
အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင်စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့ ၈ ကြိမ်မြောက် သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆုကြီးကို မိတ္တီလာမြို့မှကံထူးသွားခဲ့ပါတယ် မိတ္ထီလာမြို့ ကညနရုံးဟောင်းအနီးက ဒီလသိန်း(၁၅၀၀၀) ဆွတ်ခူးသွားကြောင်း သတင်းရရှိ မိတ္ထီလာမြို့ အောင်ဇေယျာရပ်ကွက်နေ ဝပ်ရှော့ဆရာ ကိုစိုးနိုင် မှ ဆွတ်ခူးသွားကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ Credit-Zin Moe
ကမ္ဘာ့ဘဏ် ညွှန်းကိန်းတွင် စီးပွားရေးလုပ်ရန် တိုးတက်မှု အရှိဆုံး နိုင်ငံ ၂၀ ၌ မြန်မာပါဝင်
ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ရန် လွယ်ကူမှုညွှန်းကိန်း (Ease of Doing Business) တွင် လာမည့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်အ တွက် တိုးတက်မှုအရှိဆုံး နိုင်ငံ ၂၀ စာရင်း တွင် မြန်မာနိုင်ငံပါဝင်ကြောင်း ကမ္ဘာ့ဘဏ်က စက်တင်ဘာ ၂၉ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ ကမ္ဘာ့ဘဏ်အနေဖြင့် အဆိုပါနိုင်ငံများ၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ရန်လွယ်ကူသည့် အမှတ်တိုး တက်မှုများကို အခြေခံကာ အဆိုပါနိုင်ငံများကို ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အညွှန်းကိန်းတွင် အမှတ်ပေးသည့် ကဏ္ဍ ၁၀ ခုတွင် သုံးခုနှင့် အထက်တွင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများ လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းကြောင့် အခြားနိုင်ငံများ နှင့် အတူ မြန်မာနိုင်ငံ ကိုလည်း ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကမ္ဘာ့ဘဏ်က ဆိုသည်။စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ရန် လွယ်ကူမှု အကဲဖြတ်ခြင်းကို နိုင်ငံများ၏ ယခင်နှစ်က ပြုလုပ်သည့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကြောင့် စီးပွားရေး လုပ်ရန် လွယ်ကူမှု တိုးတက်ခြင်းအပေါ်တွင်သာ ရွေးချယ်ပြီး...
(၈)ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဉ် (စ/ဆုံး) သိန်း ၁၅၀၀၀ ဆု ဓ ၃၄၁၆၁၁၊ သိန်း(10000)ဆု ဎ ၁၁၁၄၁၈၊ သိန်း ၅၀၀၀ ဆု ထ ၂၆၄၃၄၃ ဖ ၂၈၈၇၅၀ သိန်း ၂၀၀၀ ဆု လ ၉၁၄၀၂၇၊ ထ ၄၂၉၂၆၆၊ ဓ ၉၅၁၆၇၈၊ ကဂ ၁၉၄၈၉၃၊ ကဂ ၈၁၆၂၆၇၊ သိန်း ၁၀၀၀ ဠ ၉၇၄၅၈၈၊ ဃ ၆၈၀၁၂၃၊ ရ ၂၂၆၇၅၅၊ ည ၂၆၃၅၇၃၊ ကခ ၁၂၃၅၉၃၊ သ ၆၄၅၁၆၄၊ န ၈၁၆၇၇၉ Credit-MON
စာဘယ်လောက် ဖတ်လဲဆိုတော့ ရန်ကုန်ဆင်းပြီး စာအုပ်သွားဝယ်တာ ကချင်ပြည်ကို ရထားဆိုက်တော့ သူဝယ်လာတဲ့ စာအုပ်တွေက လှည်းနှစ်စီး တိုက်ရတယ်ဆိုပဲ ဒါပေမယ့် အတန်းပညာ မရှိဘူး လွတ်လပ်ရေးရပြီးတော့ သူ့ကို ပြည်နယ် ဥက္ကဌရာထူးအတွက် ဖောင်ဖြည့်ခိုင်းတယ် ပညာအရည်ချင်း ဆိုတဲ့နေရာမှာ ဖြည့်လိုက်တယ်” ခေသူမဟုတ် ” တဲ့ ဟုတ်တယ်လေ သူက ဘုန်းကြီးကျောင်းထွက် ဒါပေမယ့် ခေတဲ့ သူမဟုတ်ဘူး သူကစက်မှုနိုင်ငံ အိပ်မက်ကို မက်တဲ့သူ စက်မှု နိုင်ငံ ထူထောင်နိုင်မှ မြန်မာပြည် ချမ်းသာမယ် ဒါက သူ့ခံယူချက် ဒါကြောင့် မြစ်ကြီးနားမှာ ကားတစ်စင်းကို သူဦးဆောင်ပြီး လုပ်တယ် အဲတုန်းက ကချင်ပြည်နယ် ဥက္ကဌဆိုတော့ အခုခေတ်လို ဆိုဝန်ကြီးချုပ်ပေါ့ သတင်းစာတွေမှာ ဆမားကြီးကား ဆိုပြီး ဂုဏ်ပြုရေးကြတယ် ဒါပေမယ့် လူတိုင်းက အကောင်းရေးတာ မဟုတ်ပါဘူး တစ်ချို့က ပျက်ချော်ချော်နဲ့...
လူအများစိတ်ဝင်စားနေသည့် ဗစ်တိုးရီးယားအမှုတွင် နှစ်ဖက်ရှေ့နေများကို Wisdom Hill မူကြိုကျောင်းမှ ကျောင်းကြီးကြပ်ရေး ဒေါ်ဥမ္မာလှိုင်က တရားလိုပြု အမှုဖွင့်တိုင်ကြားနေခြင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရှေ့နေထု တစ်ရပ်လုံးကိုပါ ထိခိုက်နစ်နာစေကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံရှေ့နေအသင်းများ၏ အဖွဲ့ချုပ်က ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။ နေပြည်တော် ဒက္ခိဏခရိုင်တရားရုံး၌ ကြားနာစစ်ဆေးလျက်ရှိသော ဗစ်တိုးရီးယားအမှုမှ တရားလို၏ ရှေ့နေ ဒေါ်ရွက်နုအောင်နှင့် တရားစွဲဆိုခံရသူဘက်မှ ရှေ့နေ ဦးခင်မောင်ဇော်၊ ဒေါ်စုဒါလီအောင်တို့ကို Wisdom Hill မူကြိုကျောင်းကြီးကြပ်ရေးမှူး ဒေါ်ဥမ္မာလှိုင်က ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ ဥပဒေဖြင့် တရားစွဲဆိုတိုင်တန်းထားသည်။ ဗစ်တိုးရီးယားအမှုဖြစ်စဉ်တွင် အမှုသည်၏ တာဝန်ပေးချက်အရ ဥပဒေဘောင်အတွင်းမှ ကိုယ်စားဆောင်ရွက်ရသည့် ရှေ့နေများကို ထည့်သွင်း တရားစွဲဆိုပါက အမှုတိုင်း၌ ရှေ့နေများ တရားစွဲဆို ခံရတော့မည်ဖြစ်ပြီး ယင်းအမှုရှေ့နေများမှာ အမှန်တရား ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက် တရားခွင်တွင် ကြိုးပမ်းသကဲ့သို့ အများပြည်သူအဖြစ်မှန် သိရှိစေရန်အတွက် ပြန်ကြားခြင်းသာဖြစ်သည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံရှေ့နေအသင်းများ၏ အဖွဲ့ချုပ်မှ သဘောထားထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ နှစ်ဖက်ရှေ့နေများကို...